Ithemba ezinkampanini zakwamanye amazwe eSpain | Ezezimali Zomnotho
Jose Manuel Vargas placeholder image | | izinkampani
I-Las izinkampani zangaphandle ezisebenza eSpain sezinethemba elikhulu kakhulu kunangesikhathi sango-2012. Ucwaningo olwenziwe yi IESE Business School iqinisekisa ukuthi lezi zinkampani eziyisishiyagalolunye kweziyishumi zilindele ukukhuphuka noma okungenani zilondoloze inzuzo yazo kulokhu nangonyaka ozayo. Ngo-2012, uhhafu walezi zinkampani okwaxoxwa ngazo wawucabanga ukuthi imali ezizoyithola izokwehla uma kuqhathaniswa nonyaka odlule.
Isimo sezulu se ibhizinisi eSpainNgokocwaningo olufanayo olwenziwe ezinkampanini zakwamanye amazwe ezingaphezu kwezingama-230 ezizinze ezweni, limi ezingeni lamaphuzu angama-2,7 kwangu-5, ukuvimba umkhuba owehlayo owawufakwe ezweni eminyakeni edlule. Ezinye izinombolo ezinikeza isizathu kubo bonke abatshalizimali bakwamanye amazwe abekade bekhuluma ngamathemba amahle ezomnotho eSpain, ikakhulukazi athinta ingqalasizinda yayo, ikhwalithi yempilo, imali yabantu kanye nosayizi wemakethe yayo.
Phakathi kwengqalasizinda enconywa yilaba batshalizimali, ngokumangazayo, inethiwekhi yezitimela nezikhumulo zezindiza. Ikhwalithi ye- Izikole zebhizinisi laseSpain, ezokungcebeleka nokunikezwa kwamasiko ezwe. Kodwa-ke, bobabili abatshalizimali nezinkampani zakwamanye amazwe bakholelwa ukuthi iSpain kusamele ithuthukise izinga layo lesiNgisi nezinye izilimi, yehlise izindleko zokuphila, kanye nokutholakala kwabasebenzi abaqeqeshiwe.
Izici ezingezinhle ngokwengeziwe zeSpain, njengenjwayelo lezi zinkampani zangaphandle, yizona izindleko eziphezulu zikagesi kanye nobunzima bezezimali ngamabhange nezinye izinhlangano. Yiso kanye lesi sigaba sokugcina esithola ukugxekwa okukhulu kanye namamaki aphansi ku-barometer yocwaningo, yize ukuthuthuka okuncane kuyabonakala uma kuqhathaniswa no-2012, unyaka lapho izibalo zazingezinhle kakhulu.
Abatshalizimali bakwamanye amazwe bafuna ukuthi eSpain kune- ukuzinza okukhulu kwezepolitiki nezomnotho kanye nokulawulwa okuncane. Mayelana nemakethe yezabasebenzi, izingqinamba ezinkulu zihlobene nomthetho. Ama-70% ezinkampani zakwamanye amazwe abheka ukuthi izinguquko zakamuva zabasebenzi zenze ukuthi imakethe iguquguquke, futhi ama-60% anikeze imvume yabo kubo nakwimiphumela yabo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi utshalomali lwangaphandle luyaqhubeka nokuba yinto ebalulekile eSpain. Ngonyaka wezi-2013 kwaba ngama-euro ayizigidi eziyi-15.800, okuyisibalo esikhuphuke ngo-9% uma kuqhathaniswa nango-2012. Izibalo njengamanje ezibeka iSpain endaweni yesi-13 emhlabeni ngokuya kokutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, ngaphambi kwamazwe anjengeGerman, France ne-Italy.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Izinkampani zakwamanye amazwe eSpain zinethemba ngomnotho wezwe
Gowex, isifundo esifundile nangezindleko ezifanele